Google Pay dia tonga amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS any Espana | Androidsis
Tamin'ity herinandro ity dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahatongavan'i Wear OS. Vonona izahay hanao veloma ny Android Wear. Miaraka amin'ity fanovana ity dia toa mitady ny handray am-pahamatorana bebe kokoa ny tsena azo ampiasaina i Google. Satria toa hisy fiovana lehibe amin'ny herinandro ho avy. Amin'izao fotoana izao Google Pay dia manomboka mahatratra famantaranandro.
Satria ny fampiharana Google Pay ho an'ny Android Wear dia tsy misy afa-tsy any Etazonia sy Royaume-Uni. Saingy, manitatra any amin'ny firenena vaovao izy izao. Noho izany, ireo mpampiasa any Espana, Aostralia ary Kanada dia ho afaka manampy ny karany amin'ireo famataran-telefaona mifanaraka amin'ilay rindranasa.
Dingana voalohany manandanja amin'ny fanitarana ny rafitra miasa ary koa ny Google Pay. Mahagaga fa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia namela vaovao manan-danja roa ho antsika i Google. Rindrambaiko fandoavam-bola nohavaozina sy kinova vaovao an'ny rafitry ny fiasan'ny famantaranandro.
Any Espana, ny famantaranandro tokana misy NFC eny an-tsena dia ny Huawei Watch 2. Na dia ny vinavina aza dia amin'ity taona ity dia misy famantaranandro bebe kokoa hahatratra ny tsena izay manana io fiasa io ihany koa. Ireo mpampiasa manana ity famantaranandro ity dia mila maka ny rindranasa Google Pay amin'ny famantaranandrony.
Amin'izany fomba izany, Izy ireo dia afaka mandoa vola amin'ny alàlan'ny smartwatch any amin'ireo magazay manome an'ity fomba fandoavam-bola ity. Ny fomba fandoavana vola dia ho tena tsotra. Satria tsy maintsy ataonao akaiky kokoa ny famantaranandro ny tobin'ny fandoavam-bola. Ny dingana mitovy amin'izany izay atao amin'ny fandoavam-bola amin'ny finday. Tsy misy tsy ampoizina amin'ity lafiny ity.
Toa te hanery ny fandoavam-bola amin'ny finday amin'ny famataranandro i Google. Azo heverina koa fa hisy vaovao misimisy kokoa ao amin'ny Wear OS momba an'ity raharaha ity amin'ny herinandro ho avy. Amin'izao fotoana izao, ireo mpampiasa amin'ity famantaranandro Huawei ity any Espana dia efa afaka mampiasa ilay rindranasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy ny Google Pay for Wear OS
Android Auto mandeha ho azy mamoha ny finday avo lenta finday rehefa mifandray